Cebu Pacific na-enye mkpuchi COVID-19 iji bulie obi ike ndị njem
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Cebu Pacific na-enye mkpuchi COVID-19 iji bulie obi ike ndị njem
Airlines • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ahụike • News • Ozi Na -agbasa Ozi Philippines • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
CEB na-enye COVID mkpuchi mgbakwunye iji bulie obi ike ndị njem
COVID Chebe dị ugbu a na ụgbọ elu Cebu Pacific niile
Cebu Pacific (CEB), onye kacha buru ibu na Philippines, na-ewebata COVID Chebe, ihe mgbakwunye ọhụrụ ya na CEB TravelSure, atụmatụ mkpuchi njem njem zuru oke, iji nye ndị njem udo nke uche mgbe ha na-efe n'oge a. Nwelite oge a, nke ga-ekpuchi ụlọ ọgwụ na ọgwụgwọ na COVID na Philippines, na-achọ ịnye ndị njem nhọrọ ndị ọzọ na atụmatụ njem ha dịka ụgbọ elu na-ebute ahụike na nchekwa onye ọ bụla.
Na COVID Chebe, ndị njem na-eme njem Pasent Cebu ndị nwalere nti maka Covid-19 ga-erute PHP 1 nde (ihe ruru $ 20,805) mkpuchi maka ụlọ ọgwụ na mmefu ahụike. Nkwalite a na atụmatụ mkpuchi njem njem ụgbọ elu dị maka ndị njem niile na-efe site na mpaghara ụlọ CEB niile, yana mba ndị ọzọ ọ na-aga. Mkpuchi na-amalite na ụbọchị ọpụpụ site na mmalite ebe ọ ga-ejedebe awa abụọ mgbe mbata nke nlọghachi azụ na ebe mbido, yana oge kachasị elu nke ụbọchị 30. Ihe mkpuchi metụtara ma ndị Filipino na ndị na-abụghị ndị Filipino na-eme njem bụ ndị bi na Philippines.
CEB TravelSure COVID Chebe bụ nke ụlọ ọrụ mkpuchi nke North America (ụlọ ọrụ Chubb) dere ya. Chubb bụ ụlọ ọrụ ahịa ọhaneze kachasị ukwuu n'ụwa na ụlọ ọrụ mkpuchi ọnwụ.
“Obi dị anyị ezigbo ụtọ iwepụta CEB TravelSure COVID Chebe, n’adabere na ntinye anyị ịmalitegharia njem na njem nleta na nchekwa. Na COVID Chebe, ndị njem ga-enwe ike iji obi ike na-eme njem ka e mesiri ha obi ike na ha ga-enweta mkpuchi, ọkachasị ma ọ bụrụ na ha nwere usoro njem ha dị mkpa, "ka Candice Iyog, onye isi oche CEB maka Ahịa na Ahụmịhe Ndị Ahịa kwuru.